Bored in the House? Nazi izinto ezinhlanu okufanele uzenze Ngesikhathi sokuhlukaniswa - uLucidPix
Bored in the House? Nazi izinto ezinhlanu okufanele uzenze Ngesikhathi sokuhlukaniswa
Njengoba abaningi bethu sebehlangabezana nezimo zamanje umhlaba obhekene nazo, sesiqala ukwamukela futhi sihlole izinketho zethu ukuze sigcine siphilile. Kulesi sikhala sebhulogi, sikunikeza izinto zethu eziyisihlanu eziyintandokazi okufanele uzenze ngesikhathi sokuvalelwa. Noma ngabe yilawa alley wakho noma cha, manje yisikhathi sokuphuma kule ndawo yakho yokududuza futhi ubani owaziyo, mhlawumbe uzothola izinto ozithandayo ezintsha! Uma ungayazi ireferensi yethu ethi "Bored in the House", ulalele lapha.
#1 Zama ezinye izifundo zokuzilolonga
Njengoba izikhungo zokuzivocavoca kanye nezindawo zokuzivocavoca zivaliwe, eziningi zalezi zinkampani seziqale ukusingatha amakilasi asezingeni elithile ezinkundleni zokuxhumana ezinjenge-Instagram ne-Facebook. Isigaba samabhokisi esidumile esijoyina lo mkhuba I-Rumble Boxing, kususelwa ezigodini ezisempumalanga neNtshonalanga Melika. Abafundisayo babamba amakilasi ku-Instagram bukhoma noma ubani angajoyina! Bangama-30 kuya kwangama-45min ama-boxing wesibhakela namakilasi we-Cardio, abanokufudumala nokupholile. Noma kunjalo uma uphuthelwa ikilasi elibukhoma, hlola amanye ama-YouTube ukusebenzisa. POPSUGAR Ukuqina yisiteshi esikhulu sokuqina esivela kumavidiyo afana nokuthi "I-30-Minute restorative Yoga nokuzindla”Ku-“I-20-Minute Dance Cardio ne-Sculpting Workout"
#2 Prakthiza amakhono akho okupheka
Asikho isikhathi esingcono sokusebenza kulawo makhono wokupheka kunamanje! Thatha leyo ncwadi Recipe ekhabethe lakho lasekhishini ufike kuyo. Ziphathe ngokuhlanganisa ukudla okuthile noma izimpahla ezibhakiwe ezifana nalezo zifanekiselwa ngezansi. Ungafuna ukuzama ezinye izindlela ezintsha, isinkwa se-vegan banana? Hlola I-Minimalist Baker kwezinye izindlela zokupheka ze-vegan ukuze uguqule.
# 3 Zama ezinye izinhlelo zokusebenza ezintsha
Ukuskrola ngokunqamula kwekhamera yakho uphinde uphinde unake? Zama ezinye izinhlelo zokusebenza ezintsha zokuhlela ukuthuthukisa izithombe zakho! I-LucidPix idala izithombe ze-3D okungekho olunye uhlelo lokusebenza olukwazi ukuzala kabusha. Abasebenzisi bayakwazi ukuthumela indalo yabo ye-3D njengama-GIFS e-animated noma amavidiyo wokwabelana kuwo wonke amapulatifomu ezenhlalo, futhi bangathola ubuciko ngokungeza izihlungi, ozimele nokukhetha ukuthi bafuna ividiyo yabo ibukeke kanjani. Sonke siyazi ukuthi kuzoba khona okuningi kwe- “Throwback ngoLwesine”, ngakho-ke kungani ungazihlanganisi izithombe zakho bese uzithumela ku-3D? Sihlole ku-Instagram ukuthola ugqozi @ lucidpix3d!
# 4 Gcina iphephabhuku
Ezikhathini ezinjengalezi, kubaluleke kakhulu ukuzibheka ngokwakho nokuthi ube nokuphuma lapho ucubungula khona imizwa yakho. Ngenombolo emangazayo yemibiko yabezindaba nezindaba ku-COVID-19, kungaba nzima ukuzulazula kulezi zimo. Ukusiza ukubhekana nalokhu, zama ukugcina iphephabhuku ukulandelela ukuthi uzizwa kanjani. Iya esikoleni esidala bese u-a incwadi yokubhalela esezingeni eliphansi kusuka e-Amazon noma zama i- Usuku Lokuqala Ijenali uhlelo lokusebenza olusiza ukubhala imizwa yakho yansuku zonke.
# 5 Dansa it ngeTikTok
Okokugcina, yenza okuthile okujabulisayo nabangane bakho, umndeni noma noma ngubani oba yedwa (noma ngabe nguwe kuphela) bese uzama ukufunda umdanso. Skrolela TikTok ukuthola ukudansa okusuka kwabaqalayo kuya kweleveli yobungcweti UCharli D'Amelio choreography. Noma iyiphi indlela, umdanso usiza ukukhulula ama-endorphin, usiza imizwa yakho futhi futhi ukuhambisa!
Ungawakha Kanjani amavidiyo we-TikTok ahlukile →← Ungasakha Kanjani isithombe se-3D ku-Facebook
Izithombe Zasendlezi Wabasaqalayo
Ungawenza Kanjani Ama-GIF Wabantu Ngezinyathelo Ezi-3 ezilula
Amathiphu ama-5 Wokwakha Iphothifoliyo Yezithombe Eziku-inthanethi